ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား - Hello Sayarwon
ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ အရာက လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ သက်ရှိအရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေ၊ မမြင်ရတဲ့ တစ္ဆေသရဲတွေ၊ မဖြစ်လာသေးတဲ့ အနာဂတ်တွေ၊ အတိတ်ကအရိပ်မည်းတွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ လူတော်တော်များများက ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ရင်မဆိုင်ဘဲ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြတာပါ။ ကိုယ်ကြောက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ရှောင်ပြေးလိုက်တဲ့အခါ ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကိုပါ ပိုပြီးကြောက်လာစေဖို့၊ ရှောင်ပြေးဖို့ကို ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ပြင်းထန်လာတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။
သာမန်အခြေအနေကနေ အကြောက်လွန်တဲ့ အဆင့် (Phobia) ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာတာ၊ အသက်ရှူရခက်လာတာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ ချွေးစေပြန်ပြီး မောဟိုက်တာ၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ ထိတ်လန့်စိတ်တွေ ကြီးစိုးသွားပြီး အသိစိတ် လွတ်သွားတာ၊ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတာ၊ ဒီကြောက်စိတ်က ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အရိပ်မည်းကြီးလို လိုက်လာတာ အစရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေ ကြုံလာမှာပါ။
ဒါဆို ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေလား။
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြောက်တဲ့ အရာချင်းမတူတာပဲ ရှိတာပါ။ ဒီကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ နေစဉ်ဘဝမှာ ပြဿနာကြီးကြီးမားမား ကြုံလာတာ၊ ကိုယ်ခန္ဓါနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာတာ၊ အကြောက်လွန်တဲ့ အခြေအနေ (Phobia) ကို ရောက်လာပြီဆိုမှ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့၊ စိုးရိမ်ရတဲ့ စိတ်အခြေအနေလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာ ဘယ်အရွယ်မှာ အစပျိုးတာလဲ။
များသောအားဖြင့် အရွယ်ငယ်သေးတဲ့ ကလေးဘဝမှာ အစပျိုးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးက ကြောက်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အရာတစ်ခုကို မိဘတွေက သာမန်လောက်ပဲ သဘောထားပြီး လွှတ်ပေးထားလိုက်တဲ့အခါ ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာ ကြီးတဲ့အထိ ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာ မိဘတွေရဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ် မျိုးရိုးဗီဇက မွေးလာတဲ့ ကလေးကို သွားပြီး သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း အစပျိုးလာတာမဟုတ်ဘဲ ရုတ်တရက် ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ဥပမာ – အသက်ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်မှု ကြုံခဲ့ရတာ၊ စိတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုတွေ၊ လိင်အကြမ်းဖက်စော်ကားခံရတာတွေကြောင့်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာကျန်ခဲ့ပြီး ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာ ကုသလို့ ရလား။
တခြားသော စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ကွာသွားတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ်က ဘာကို ကြောက်ရွံ့နေတာလဲ၊ ဒီကြောက်ရွံ့စိတ်ကို ခံစားနေရတဲ့သူက သေသေချာချာ သိနိုင်တာပါပဲ။ ဒီအချက်ကြောင့် ကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာ ကုသဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ကုသရာမှာလည်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကုထုံးပညာရှင် သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါ ကု ဆရာဝန်တွေနဲ့ သေချာပြသပြီး စိတ်ကုထုံးနည်းလမ်းနဲ့ ကုသမှုခံယူလို့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီစိတ်အခြေအနေ ခံစားနေရသူဟာ ဆေးသောက်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ အရမ်း စိုးရိမ်လွန်ပြီး အကြောက်လွန်မှုကြောင့် စိတ်ရော လူပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်လာပြီဆိုမှ စိတ်ငြိမ်ဆေး သောက်ဖို့အတွက် ဆရာဝန် ညွှန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖျောက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ်ကြောက်နေတဲ့ အရာကို ရှောင်မပြေးဘဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ပါပဲ။ အစပိုင်းမှာတော့ ခဲယဉ်းတယ်လို့ ထင်နိုင်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသားကျသွားတဲ့အခါ ကိုယ်က လိုတာထက်ပိုပြီး ကြောက်နေတာပါလား ဆိုတဲ့ အသိ ဝင်လာမှာပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ကိုယ်က စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်လဲ၊ ဘာတွေကို ကြောက်တတ်လဲဆိုတာ သေချာ သိထားရင် ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီကြောက်နေတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပဲ အရာရာကို ရှောင်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေရင် ကိုယ့်ဘဝက ထင်ထားသလောက် နေပျော်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီစိတ်ကို ကိုယ်တိုင် နားလည်လက်ခံထားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
How To Overcome Fear -https://www.wikihow.com/Overcome-Fear (April 1, 2019)
Overcoming Fear And Anxiety -https://www.mentalhealth.org.uk/publications/overcome-fear-anxiety (April 1, 2019)
စိုးရိမ်ပူပန်လွန်းတဲ့ စိတ် ကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေဖျောက်ကြမယ်
Cyclothymia ခေါ် အပျော့စားစိတ်နှစ်ခွရောဂါ
စိတ်ရောဂါအများစုနည်းတူ Cyclothymia ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို အခုချိန်ထိ ရေရေရာရာမသိရှိရသေးပါဘူး။ သုတေသနတွေလည်း ပြုလုပ်ဆဲပါပဲ။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး နိုဝင်ဘာ 27, 2020 .2mins read
ဆီးချိုရှိသူ အတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူ တစ်ယောက် ရဲ့ စိတ်သောက ကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, ကျန်းမာရေးစင်တာ နိုဝင်ဘာ 10, 2020 .3mins read
စွမ်းအင်ကုန်ခမ်းပြီး ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတောင် မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေအနေကို burnout လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်း စက်တင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်စမြဲပါ။ Covid -19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 8, 2020 .2mins read
ခွေးကြောက်တဲ့ စိတ်ရောဂါ (Cynophobia)
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 9, 2021 .2mins read
Aphantasia (သို့မဟုတ်) စိတ်မျက်စိကွယ်ခြင်း
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 18, 2021 .2mins read
ဘုရားပုံတော်တွေကို ကြည့်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ ပြစ်မှားချင်စိတ်ပေါ်နေတာ . . .
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 7, 2020 .3mins read